Ekipa fizahan-tany | Hongli
Ny orinasanay dia tsy miraharaha fotsiny ny ezaka ataon'ireo mpiasa fa ny fahasalaman'ny mpiasa sy ny fahasalaman'ny mpiasa ihany koa. Ohatra, hikarakara fihaonana ara-panatanjahantena ny orinasanay mba ahafahan'ny mpiasa miasa. Tamin'ny herintaona, ny mpandray anjara rehetra dia mandray anjara amin'ny fihaonana ara-panatanjahantena. Nandritra ny fihaonana ara-panatanjahantena dia nametraka hetsika ara-panatanana maro izahay. Ankoatra ny hazakazaka miverina 4 * 50, misy koa ny ady, 100m mihazakazaka hazakazaka ary ny fizahana fahalalana momba ny fanatanjahantena.
Afa-tsy ny fihaonana ara-panatanjahantena dia hikarakara ny fizahan-tany ekipa ihany koa ny orinasa. Tamin'ny taona lasa, niara-nandeha ZHOUSHAN niaraka izahay. Ao amin'ny tarika misy anay dia mpiasa miisa 26 no mandray anjara amin'ny fizahan-tany. Voalohany, nandeha tao zhoushan izahay bus. Adiny efatra teo ho eo no tonga tao. Tamin’ny 1 ora teo dia nandray ny sakafo atoandro izahay. Taorian'ny sakafo antoandro dia nanomboka niakatra tao an-tendrombohitra izahay ary nitsidika ilay toerana nijerena azy. Taorian'ny 2 ora teo dia tonga teny an-tampon'ny tendrombohitra izahay. Ary avy eo, nalainay ireo sary. Niala teo amin'ny antsasaky ny ora izahay dia niverina.
Avy eo, nandeha tany amin'ny faritra mahafinaritra an'i Wu Shi Tang izahay. Amin'ity faritra ity dia nahita vatosoa mainty sy maivana be izahay. Ary naka sambo koa izahay mba hitsidika ilay farihy.
Amin’ny alina dia nanam-potoana hanao asa maimaimpoana izahay. Nankany amoron-dranomasina izahay ary nilalao lalao. Na izany aza, olona maromaro no nisafidy ny hitsidika ny tsenan'ny alina. Raha ny mpiasa tonga teny amoron-dranomasina dia nilalao fasika ary nanandrana nisambotra ny foza aza.
Nihazo ny tendrombohitra Putuo izahay ny ampitso. Izahay mitsidika ny vato solontena toa ny vato toa ny fo. Ny toerana lehibe indrindra dia ny alàlan'ny alàlan'ny kianjan'ny tempoly.
Rehefa avy nitsidika dia niverina nankany Hangzhou izahay. Tena fitsangatsanganana lehibe.